Shina: Mitandrema amin’ny QQ! · Global Voices teny Malagasy
Shina: Mitandrema amin'ny QQ!
Voadika ny 02 Febroary 2019 7:38 GMT
Hanomboka endrika iraisam-pirenena amin'ny fampiharana QQIM tsy ho ela ny orinasan'ny Teknolojiam-baovao Shinoa, Tencent, mpandraharaha ny tolotra QQIM malaza. Hanampy hanitsy ny sehatra ara-barotra ny Fons Tuinstra avy ao amin'ny China Herald. Azo trohana ato ny dikan-teny anglisy.
Satria voasakana ny MSN sy ny twitter amin'izao fotoana izao, mahita ny sasany fa fahafahana tsara ho an'ny Tencent ny fanombohana ny endrika iraisam-pirenena. Na izany aza, ao amin'ny fiarahamonin'ny twitter Shinoa, maro ireo miantsoantso amin'ny namany : mitandrema amin'ny QQ! na mety hampigadra anao ny QQ!
Mitandrema amin'ny QQ!
Nampiasa QQ i Digitalboy mba hikarakara fivorian'ny mpiserasera aterineto ao Chengdu, Sichuan, tamin'ity volana ity. Voatery nahemotra ny fivoriana. Nampitandrina izy fa:
Avy amin'ny zava-niainan'i Chengdu, azo antoka fa tsy tokony hampiasa QQ hanaovana karajia isika.
Nanatevin-daharana ny resaka i Adeyso ary nanipika fa nanasonia fifanaraham-piarahamiasa amin'ny fitsarana ambony Shinoa ny Tencent fa azo ampiasaina ho porofo ara-pitsarana ny tahirin-kevitra amin'ny karajia.
Nanana fahafahana nitsidika ny birao ao Shenzhen an'ny Tencent i Huyong tamin'ity herinandro ity, nitatitra tao amin'ny twitter momba ny fanazavan'ny mpitantana ny Tencent mikasika ny olana momba ny fiainana manokana izy:
Nilaza ny mpitantana ny Tencent hoe: na ny sampan-draharaham-panjakana aza mampiasa ny fampiharana IM an'ny Tencent sy ny vondrona QQ satria manana fenitra ara-piarovana ambony ny fampiharana. Eo amin'ny tontolo iraisam-pirenena, hamela ny CIA hanivana ny hafatra rehetra ataon'ny mpiserasera ireo orinasa tahaka ny Yahoo sy ny MSN. Tsy hanao izany ny Tencent raha tsy mangataka ny governemanta.
Raha tsy matahotra ny higadra ianao …
Efa nogadrain'ny polisy nandritra ny tapa-bolana tamin'ny volana Jolay i Amoiist, nampitandrina ny namany ao amin'ny twitter izy. Tohizo ny fampiasana ny QQ raha tsy matahotra ny ho any am-ponja ianao.
Hisambotra antsika amin'ny alalan'ny QQ ny polisy. Rehefa nogadrain'ny polisy aho, dia nangataka ahy ny polisy mba hanasonia antontan-taratasy misy ny tahirin'ireo karajia niarahana tamin'i Atoa. You. Tsy misy ifandraisany amin'ny raharaha ny ankamaroan'ilay karajia ka tsy nety nanasonia aho. Nilaza ny polisy fa na dia tsy nanao sonia aza aho dia nanana porofo ampy momba ny raharaha izy ireo.
Nitatitra ihany koa ny mpisera Twitter iray hafa (arovana ny momba azy) fa nosamborin'ny polisy teo an-toerana izy noho ny fikarakarana fivoriana misy endrika politika, ary nandritra ny fitazonana azy dia nanao sonia lahatahirin'ny karajia QQ tao amin'ny paositry ny polisy izy.
secretaryzhang naneho hevitra tao amin'ny olomangan'ny QQ an'ny Tencent:
Ny olomangan'ny QQ ao amin'ny Tencent dia mitovy amin'ny “pingouin” malefaka sy adala. Saingy raha ny tena marina dia voromahery mpihaza miasa ho an'ny Antoko Kominista Shinoa sy ny governemanta izy.